Inona ny Buffalo Hump ary ahoana ny famongorana azy | Bezzia
Toñy Torres | 20/07/2021 20:00 | Torohevitra momba ny fahasalamana
Miova ny taona, miova ny vatana, indraindray tsy azo alaina ary ambonin'izany rehetra izany, nefa tsy dia tsapako akory. Ny iray amin'ireo fanovana izay mitranga matetika dia ny fisehoan'ny karazan-doha ao amin'ny faritra hatoka. Ny kyphosis vozon-tranonjaza no tena anarany, na dia antsoina koa hoe Buffalo Hump.
Manana io banga kely io eo amin'ny tendanao ve ianao ary tsy fantatrao izay tokony hatao hanary azy? Holazainay aminao avy hatrany ny antony hivoahany, ny fomba famongorana azy io ary ny fanazaran-tena azonao atao hanatsarana ny fihetsika avy any aoriana. Na dia tsy aretina lehibe aza izy io dia mety tsy mahazo aina rehefa manao fihetsehana sasany.
Fantatro ny antony manelingelina anao amin'ny ambaratonga hatsarana, satria mamokatra tsy mahazo aina aoriana na satria manakana ny fihetsika tsy marina fotsiny izany dia ampianarinay ianao hanitsy izany olana izany. Jereo hoe inona ilay Buffalo Hump, ny fomba fanitsiana azy ary inona no tokony hataonao hisorohana azy tsy hiseho intsony.
1 Inona ilay Hump Buffalo
2 Ahoana ny fanesorana ny Buffalo Hump
Inona ilay Hump Buffalo
Ny Buffalo Hump dia miavaka amin'ny fisehoan'ny bontolo na faritra miolakolaka ao amin'ny faritry ny hatoka. Ity karazana hump ity, Izy io dia mamokatra amin'ny alàlan'ny fanangonana tavy, na dia mety vokatry ny aretina aza izany matotra kokoa, toy ny osteoporose. Na dia amin'ny tranga aretina ankoatry ny hump aza dia miseho ny soritr'aretina hafa, noho izany dia tsy tokony ampifandraisina amin'ny zavatra matotra foana izany.
Na izany aza, ny Buffalo Hump azo avahana amin'ireto toetra manaraka ireto:
Ny hatavezina: Araka ny efa hitanao, ny Buffalo Hump dia miseho noho ny fiangonan'ny tavy, ka olona matavy loatra na matavy loatra no ahiana hiharan'izany.
Fanjifana fanafody sasany: Fitsaboana maharitra amin'ny fanafody glucocorticoid, izany hoe kortisone.
Lova fototarazo: Eny misy olona ao amin'ny fianakavianao manana hump buffalo, azo inoana fa manana izany koa ianao.
Fihetsika ratsy: Fihetsika tsy mety amin'ny hazondamosina iray amin'ireo antony lehibe izay anangonan'ny tavy ao amin'io faritra vozona io. Ny fanitsiana azy dia afaka manampy anao manala azy.
Ahoana ny fanesorana ny Buffalo Hump
Misy fitsaboana isan-karazany hanalana ny Buffalo Hump, ao anatin'izany ny liposuction hanesorana ny tavy eo an-toerana. Na izany aza, ny dingana voalohany dia tadiavo ny antony ary atombohy ny fitsaboana ny hump avy ao aminy. Raha tranga matavy loatra io, ny zavatra voalohany dia ny manomboka amin'ny sakafo mahasalama, ara-dalàna eo ambany fanaraha-mason'ny mpahay sakafo iray.
Ho an'ireo tranga izay tsy dia tsara loatra ny antony, dia ilaina ny fotoana iarahana amin'ny mpitsabo. Satria ankoatry ny fanampiana anao hanitsy ny Buffalo Hump dia hanome anao torolàlana sy fanazaran-tena hanitsiana ny fihetsika sy hisorohana ny fisehoany indray amin'ny ho avy. Raha ny amin'ireo tranga misy ifandraisany amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana, ilaina ny mandeha any amin'ny biraon'ny manam-pahaizana manokana mba hitady fomba hafa.
Ankoatra ny fitsaboana estetika dia misy ihany koa fanatanjahan-tena tena mahomby hanafoanana ny hump buffalo.
Fananganana tratra: Mandry eo amin'ny gorodona eo ambony tsihy ary apetraho amin'ny sisin'ny vatanao ny tananao amin'ny zoro 45 degre, ary miatrika ny felatananao. Ahinjiro araka izay tratranao ny hazondamosinao, manindry ny lamosinao amin'ny tany. Ankehitriny, atsangano ny tratrao rehefa manindry ny valahanao. Tazomy mandritra ny 10 segondra ity toerana ity ary miverina amin'ny toerana voalohany. Ataovy amin'ny alàlan'ny famerenana 10 miverimberina ny fampiharana.
Fananganana tanana: Tsindrio tsara amin'ny rindrina, loha, soroka, voditongotra ary valahana ny vatanao amin'ny rindrina. Atsangano ny sandrinao amin'ny alàlan'ny fametahana azy ireo amin'ny rindrina, mandra-pahatongan'ny sorony. Mandritra ny fanaovana fampiharana, tsy tokony hanondrika ny lohanao ianao na hampihetsika ny sorokaAmin'izany dia hialanao amin'ny ratra. Manaova andiany roa an'ny repoblika 10 isaky ny mandeha.
Ny fanatanterahana ireo fanazaran-tena isan'andro dia hanampy anao hanatsara ny fihetsikao ary hampihena tsikelikely ny Buffalo Hump. Raha manampy fanatanjahan-tena tanteraka isan'andro koa ianao, toy ny mandeha an-tongotra, bisikileta na milomano, hihena ianao amin'ny fomba ankapobeny. Izay manampy amin'ny fanjavonan'ny fanangonana tavy amin'ny faritra toy ny tendany. Tandremo ny sakafonao ary manaova fanatanjahan-tena tsy tapaka, hankasitraka izany ny vatanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Torohevitra momba ny fahasalamana » Inona ny atao hoe Buffalo Hump ary ahoana ny famongorana azy